Flam Si Myrdal, Norway: A Beautiful Summer Stop | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Flam Si Myrdal, Norway: A Beautiful Summer Stop
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 04/02/2020)
line tareenka Flam ka Flam in Myrdal ayaa la sheegay in mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan sodcaalladoodii oo tareen adduunka iyo waxaan u garan karaa sababta. safarka kaliya ee waxay qaadataa hal saac laakiin muuqaal ah waa si dhab ah neefta-qaadashada. Ha ka maqnaan waayo-aragnimo marka booqashada Norway. In safarka saacaddii, tareenka qaadataa rakaab ka Sognefjord ee Flam taas oo ah heerka badda, saldhigga buurta Myrdal taas oo at 867 mitir heerka badda. Tani waa mid ka mid ah waddooyinka tareenka Heerka-eeg steepest ee dunida. line tareenka qaaday 20 sano si ay u dhamaystiraan. sugnan The maroojinta in ay maamulaan iyo soo baxay show buurta off dhiirato ugu injineernimada iyo xirfad leh in taariikhda tareenka Norwegian abid arko. Flam in Myrdal, Norway: A Beautiful Summer Stop runta ah waa safar ee Meyeydaan.
Fuushan Railway Flam ah
Qaadashada tareenka ka Flam in Myrdal idiin qaadan doonaa iyada oo loo marayo 20 sugnan, 18 kuwaas oo la dhisay by gacanta, iyo istaagaan dhowr tuulo oo sida ay abeesooyinku ay jidka kor u Valley Flam ah. tareenka wuxuu ku siinayaa rakaab view ah dusha laakiin isku day inaad hesho kursi soo socota si ay daaqad ee views fiican oo fur karaa Summer waayo aragnimo gaar ah oo dheeraad ah. Myrdal station Waa sare oo buurta iyo waxay ka kooban tahay ma aha qolka sugitaanka, miiska tigidhka, iyo a cafe yar. Waxaad raaci kartaa tareenka kor iyo hoos buurta.
Flam in Myrdal ee Summer
Summer waa waqti fiican in tareenka ka Flam in Myrdal. cimiladu waa diiran iyo wax kasta waa ku cagaar! Ka fikir diidanaa buuro iyo madarad-cad biyo socda la Dhirta qurux badan oo ubax ubaxyada buuxa. Waxaa kaloo jira wadooyinka hortayada iyo ka Flam iyo Myrdal labada. Taas macnaheedu waa in aad ku qaadi karto tareenka ilaa Myrdal ka dibna dib hoos u tug oo wuxuu ku raaxaysan qorraxda.
Haddii ay jirto hal shay in aad sameyso marka aad booqanayso Norway, tareen tareenka ka Flam in Myrdal waa. Waa stop ah Summer qurux badan. Tareenka ayaa ka waddaa sannadka oo dhan leh ilaa 10 bixitaanka maalin kasta ee Summer. tigidhada Iibso degaanka ee Norway at goob kasta oo tareen duuliyo ama adiga oo waca xarunta call NSB. Waxay hadda waxaa laga heli karaa online ma. U hubso in aad tigidhada aad u tareen this sida ugu dhaqsaha badan ee aad timaado Norway si looga fogaado in niyad jab aad u hesho iyo waayo-aragnimo ah ee Meyeydaan!
Waxaan bixiya tigidhada tareenka Yurub, kaliya waxaad tagtaa our website Save A Tareen oo wuxuu ku raaxaysan safarka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/flam-to-myrdal-norway/- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ru si / fr ama / luqadaha de iyo ka badan.
#flam #Myrdal #xagaaga safar waddo